मान्छेको ‘मस्तिष्क’मा कसरी पुग्छ ‘नाम्ले’ जुका ?  Hamrosandesh.com
मान्छेको ‘मस्तिष्क’मा कसरी पुग्छ ‘नाम्ले’ जुका ?
भारतमा एक आठ वर्षीया बालिकाको मस्तिष्कमा ‘टेपवर्म’ अर्थात् नाम्लेकीराका एक सयभन्दा बढी फुल भेटिए । ती बालिकाले प्रत्येक दिन टाउको दुख्ने र बेलाबेला रिङ्गटा लाग्ने गुनासो गर्थिन् । उनमा यो समस्या झन्डै छ महिना देखियो । समस्याको कारण थाहा पाएपछि अभिभावकहरू पत्याउनै सकिरहेका थिएनन्,‘बालिकाको मस्तिष्कमा नाम्ले किराका सयवटा भन्दा बढी फुलहरू थिए । ती सानासाना समूहमा थिए ।’ दिल्लीको गुडगाँवस्थित फोर्टिस अस्पतालको न्यूरोलोजी विभागका निर्देशक डा. प्रवीण गुप्ताको निगरानीमा बालिकाको उपचार भइरहेको छ ।
डा. गुप्ताले भने, ‘हामीसँग आउनुअघि बालिकाको उपचार भइरहेको थियो । उसलाई निकै टाउको दुख्ने र सुन्निने समस्या थियो ।’ सुन्निने समस्या कम गर्नका लागि दिने गरिएको स्टेरोइड्सका कारण बालिकाको तौल ४० किलोबाट बढेर ६० किलो पुग्यो । तौल बढेपछि बालिकालाई झनै गाह्रो भयो । उनी पूर्ण रूपमा ‘स्टेरोइड्स’मा निर्भर भइन् । त्यसपछि अभिभावकले बालिकालाई डा. गुप्ताकहाँ लगे जहाँ बालिकाको सीटी स्क्यान गरियो ।
डा. गुप्ताले भने, ‘बालिकालाई मकहाँ ल्याइँदा उनी अचेत थिइन् । सीटी स्क्यान गर्दा उनको मस्तिष्कमा सेता धब्बा देखिए । ती धब्बा अरू केही नभएर नाम्लेका फुल थिए । र, फुलहरू एउटा वा दुइटा नभई सयभन्दा बढी थिए ।’ उनलाई डा. गुप्ताकहाँ लग्ने बेलासम्म नाम्लेका फुलहरूले गर्दा ती बालिकाको मस्तिष्कले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकिरहेको थिएन । डा. गुप्ता भन्छन, ‘सबैभन्दा पहिले हामीले औषधि दिएर बालिकाको मस्तिष्कको सन्तुलन ल्याउने काम गर्यौं । ’ हाल ती बालिकाको मस्तिष्कमा रहेका नाम्लेकिराका फुल नष्ट पार्ने औषधि दिइँदैछ । डा. गुप्ताका अनुसार नाम्लेका फुलमा लगातार वृद्धि भइरहन्छ । डा. गुप्ताका अनुसार राम्रोसँग नपकाइएका र राम्ररी नपखालिएका तरकारी खाँदा नाम्ले र नाम्लेको फुल पेटमा पुग्छ र त्यहाँबाट रगतमार्फत् शरीरका विभिन्न भागमा फैलिन्छ ।
के हो नाम्ले ?
नाम्ले एक प्रकारको परजीवी हो । पोषणका लागि यो अरू जीवमा निर्भर हुन्छ । यसका पाँच हजारभन्दा बढी प्रजाति छन् । तिनीहरू एक मिलिमिटरदेखि १५ मिटरसम्म लामो हुन सक्छ । यसको जीउ खण्डखण्डमा बाँडिएको हुन्छ र फित्ताजस्तो देखिन्छ । यसको शरीरमा बल्छी जस्तो संरचना हुन्छ जसका सहयोगमा यो आफूले आश्रय लिने जीवको अङ्गसँग टाँसिइरहन्छ । शरीरको सतहमा हुने ‘क्युटिकल’बाट उसले आफूलाई चाहिने खाद्यपदार्थ सोसेर लिन्छ । आफ्नो शरीरभित्र पाचन प्रक्रिया नहुने भएकोले यसले पचाइसकेको खाद्यपदार्थ मात्रै सोस्ने गर्छ ।
नाम्ले चेप्टो, रिबन जस्तो हुन्छ । शरीरमा प्रवेश गरेपछि यो जुका आन्द्रामा बस्न थाल्छन् ।
तर सधैँ त्यहीँ नबसेर रगतको माध्यमबाट शरीरका अरू अङ्गमा पनि पुग्छ । कहिलेकाहीँ आँखा र मस्तिष्कमा पनि पुग्छ । एशियाको तुलनामा युरोपेली देशहरूमा यसको खतरा कम हुन्छ । एनएचएसका अनुसार शरीरभित्र नाम्ले हुँदैमा कुनै लक्षण देखिन्छ भन्ने छैन । तर शरीरका संवेदनशील अङ्गमा पुगेपछि खतरा हुन्छ । तर यसको उपचार धेरै कठिन हुँदैन । दिल्लीस्थित गङ्गाराम अस्पतालका पेट रोग विशेषज्ञ डा. नरेल बंसलका अनुसार नाम्ले जुका प्राणघातक नभए पनि बेवास्ता गरिए खतरनाक हुनसक्छ ।
सुङ्गुर अवथा गाईको अधकल्चो मासु र पूरै नपाकेको माछा खाँदा मानिसको शरीरभित्र नाम्ले पुग्नसक्छ । खासमा यी जीवमा नाम्लेको लार्भा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राम्रोसँग नपकाएर खाएमा शरीरभित्र नाम्ले पुग्नसक्छ ।
–दूषित पानी पिउनाले
–काँचो वा अधकल्चो बन्दागोभी र पालुङ्गो खानाले
–पानी वा माटोमा उम्रने तरकारी राम्रोसँग नपखालेर खानाले
सामान्यतया स्पष्ट लक्षण देखिँदैन । तर शरीरभित्र नाम्ले जुका भएपछि दिसामा देखिनसक्छ । त्यसबाहेक पेट दुख्ने, बान्ता हुने, कमजोरी र झाडापखालाको समस्या देखिनसक्छ । शरीरमा नाम्लेको संख्या बढी भएका रिङ्गटा लाग्ने, छाला पहेँलो हुने, हेर्न गाह्रो हुने लगायत समस्या पनि देखिनसक्छ ।
शरीरमा नाम्ले परेपछि औषधिले ठिक हुनसक्छ । तर केही सावधानी अपनाउँदा सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ :
– राम्ररी नपकाएको कुनै प्रकारको मासु नखाने
– राम्ररी नपखालेका फलफूल तथा सागसब्जी नखाने
– खाना खानुअघि साबुनपानीले हात धुने र शौचपछि राम्रोसँग नङ पनि सफा गर्ने
– सधैँ सफा पानी पिउने
डा. बंसल भन्छन् नाम्ले प्राणघातक नभए पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । शरीरको जुनसुकै भागमा पुग्नसक्ने भएकोले शरीरको त्यो हिस्सामा पक्षघात पनि हुनसक्छ ।